कन्या जाली च्या तिदैमा क रणी नै भन्ने हुदैन : नर्स करुणा दाहाल – Nep Stok
कन्या जाली च्या तिदैमा क रणी नै भन्ने हुदैन : नर्स करुणा दाहाल
फागुण २४, २०७८ मंगलबार 239
जब’रज’स्ती क’र’णीको मुद्दा खेपिरहेका चलचित्र अभिनेता पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । फागुन १५ बाट पल शाह तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन् । आइतबार दोस्रोपटक म्याद थप हुँदासम्म प्रहरीले पल शाहसहित ५ जनाको बयान लिएको छ । १७ वर्षीया बालिकाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा आफुसँग नजिकिएका शाहले पटक–पटक ब’ला’त्कार र यौ’न दु’र्व्यव’हार ग’रे’को भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
के कन्या जाली पुरुषसंग सहबास गर्दा मात्रै च्या’तिन्छ त ? ब’ला’त्का’र गरिएको भन्ने उजुुरीकै आधारमा बालिका वा किशोरीको कन्या जाली च्या’ति’एको मेडिकल रिर्पोट आयो भने के ब’ला’त्का’रकै कारण हो भन्न मिल्छ त ? के त्यसैको आधारमा ब’ला’त्का’र गरिएकै हो भनेर आरोपित पुरुषलाई सजाय दिन कानूनले अनुमति दिन्छ त ? या फेरी बालिका या किशोरीको कन्या जाली अरु नै कारणले च्या’तिन्छ ? यि र यस्तै प्रश्नहरुमा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. यम दुवा भन्छन्:
किशोरीको कन्या जाली अर्थात भ’र्जी’नि’टी यस्लाई अझैं प्रष्ट रुपमा बुझिने गरी भन्ने हो भने कुमारित्व शा’री’रि’क स’म्प’र्क’बाट मात्रै च्या’ति’न्छ भन्ने हुँदैन । यदि कसैले पनि यस्तो खालको बुझाई राख्दछ भने त्यो एकदमै गलत बुझाई र धारणा हुन जान्छ । किनभने यो कन्या जाली भनेको असाध्यै पातलो हुन्छ र यो यो’ ‘नीको भा’गमा हुने जाली हो । यो विभिन्न शा’री’रि’क कृयाकलापका आधारमा च्या’ति’ने प्रवल सम्भावना रहेको हुन्छ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार महिलाले गर्ने काम र कृयाकलापका आधारमा यो कन्या जाली च्या’ति’न्छ । पाहाड तिर हो भने घाँस दाउरा बोक्दा, पानी भरिएको गाग्री बोक्दा, तराई तिर हो भने साईकल चलाउँदा, भैंसीका माथि बसेर गोठालो गर्दा, गाउँघरतिर हो भने अझैं सानै उमेरमा मेलापात गर्दा आदि ईत्यादि जस्तो सुकै काम गर्दा पनि कन्या जाली च्या’तिने सम्भावना रहन्छ । किनभने यो असाध्यै पातलोभन्दा पातलो रेसादार झिल्लीले बनेको हुन्छ । जुन निकै नै कम्जोर हुन्छ । शरीरले कुनैपनि बल पुग्ने काम गरेको खण्डमा त्यो जाली च्या’ति’न जान्छ ।
कन्या जाली च्या’तिनु भनेको कुनै पुरुषसंगको सहबासकै कारण च्या’तियो भन्ने हुँदैन । या फेरी कुनै पनि किशोरी या युवतीको कन्या जा’ली च्या’तिनु भनेको पुरुष नै कारण भन्ने हुँदैन । किशोरीको मेडिकल रिर्पोट अनुसार कन्या जाली च्या’तिएको भनिएको छ भने त्यस्तो खण्डमा ब’ला’त्का’र गरेर नै च्या’ति’एको भन्ने त हुँदै हुँदैन । अघि माथि भनें झैं किशोरीको कन्या जाली च्या’ति’नुमा घरेलु काम मात्र पर्दैनन् । कतिपय किशोरीहरु त १३, १४ वर्षको उमेरदेखि १७, १८ वर्षको हुँदा उनीहरु आफैंपनि ह’स्तमै’थु’न गरेर आफ्नो से’ ‘क्स ह’र्मो’नलाई क’न्ट्रो’ल गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि कन्या जाली च्या’ति’न सक्छ । यदि कुनै पुरुषसंग उनीहरुले सहबास गरे भने उनीहरुको कन्याजाली त पहिला नै च्या’ति’एको हुनाले पुरुषसंगको सहबासले नै च्या’तियो भन्नै मिल्दैन । यदि कुनै किशोरी ब’ला’त्कृ’त भईन् भने कानूनी प्रकृया अनुसार उनले कसैलाई ब’ला’त्का’रको मुद्या लागएकी छन् भने उनको कन्या जाली ब’ला’त्का’र गरिएको भनिएको पुरुषले नै च्या’ति दि’एको भन्ने हुँदैन । उजुरी अनुसार मेडिकल रिर्पोटले त कन्या जाली च्या’ति’एको भन्ने नै देखाउँछ ।
यस्लाई अझैं सजिलो भाषामा भन्ने हो भने डाक्टरहरुले कन्या जाली च्या’ति”एको देख्छन् तर उक्त कन्या जाली पुरुषसंगको सहमतिमा होस् या ज’बर’ज’स्तीको ब’ला’त्का’रमा नै किन नहोस् उक्त जाली च्या’ति’एको भन्ने हुँदैन । र मेडिकल चेक जाँच गर्दा त्यो थाहा हुने कुरा पनि हुँदैन । मेडिकलको रिर्पोटमा केवल कन्या जाली च्या’ति’ए’को भन्ने मात्रै निकालिन्छ । ब’ला’त्का’रकै कारण कन्या जा’ली च्या’ति’एको हो वा होइन भन्ने कुराको रिर्पोट बनाउनकालागी २४ घण्टा भित्रमै चेक जाँच गरिसक्नु पर्छ ।
Prevपक्राउ परेकी भनिएकी शर्मिला वाइबा बुटवलमा भेटीईन, भन्छिन् जेल जान्छु तर रेखा थापा संग माफी माग्दिन्
Nextकाठमाडौंको घटनाका परिवारले लेखेको नोट फेला, ‘सवैले सल्लाह गरेर वि’ष खाए’
आज नेपाल बन्द , यस्तो छ काठमाडौंको अवस्था
पल प्रकरणमा गर्जिन चर्चित नायिका निरुता सिंह,भनिन तपाई हामी को हो ? (भिडियो हेर्नुहोस्)